भाग्य हे 'को आइरिस भाग्य Spins |
भाग्य हे 'को आइरिस भाग्य Spins एक परी मुछिएको आइरिस लोकगीत आधारमा रंगीन स्लट खेल भाग्यमानी Leprechaun भनिन्छ. सान्टा क्लाउस जस्तै, तपाईं भाग्य प्राप्त गर्न सक्छन् कि भाग्य को भार संग Leprechaun उपहार तपाईं. यस बेलायत सर्वश्रेष्ठ मुक्त स्लट spins खेल, त्यहाँ पाँच रील र रंगीन प्रतीक तीन पङ्क्तिहरू छन्. पृष्ठभूमिमा धेरै जीवंत देखिन्छ र आफ्नो मूड लिफ्टहरु एक उज्ज्वल इन्द्रेणी एक हरिया grassland छ. खेल सँगसँगै खेल्छ कि खुसी संगीत विषय गर्न रमाइलो तत्व भन्छन्. खेल एक समयमा दुई मोड तपाईं या त एक स्लट खेल्न सक्छन् जहाँ वा चार स्लट छ. आधार खेल मा सट्टेबाजी सीमा £ 500 £ 0.10 छ भाग्य spins तपाईं £2देखि प्रति स्पिन £ 500 शर्त गर्न अनुमति गर्दा.
यो रंगीन Leprechaun आधारित विषय स्लट निलो गेमिङ छापा विकास भएको थियो. तिनीहरूले क्यासिनो साथै साइटहरूलाई खेलाडीहरूलाई लागि लोकप्रिय विकल्प को एक बनाएको छ कि अनलाइन क्यासिनो उद्योग मा अनुभव को धेरै वर्ष छ.
यो बेलायत सर्वश्रेष्ठ मुक्त स्लट spins खेल आफ्नो आकर्षक प्रतीक संग खेलिन्छ. त्यहाँ सुन सिक्का को बर्तन छन्, रातो साथ, नीलो र हरियो रत्न. सुनको पट तपाईं को शीर्ष खम्बा दिन्छिन् 500 पाँच प्रतीक प्रदर्शनमा मा सिक्का. बाट कार्ड प्रतीक 10 को एक गर्न श्रेणी तिर्ने राख्नु हौं. त्यहाँ खेल मा दस paylines छन् र सबै प्रतीक दुवै तरिका बाट आसन्न स्थितिहरू तिर्न. त्यहाँ गेम लोगो छ बोनस प्रतीक हो र यो मात्र भाग्य spins समयमा देखिन्छ.
भाग्य Spins: यसले तपाईँले यो समयमा समय कुनै पनि चयन गर्न सक्नुहुन्छ विकल्प छ बेलायत सर्वश्रेष्ठ मुक्त स्लट spins खेल. के तपाईं चाहनुहुन्छ दुई खेल बीच टगल गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि समयमा. यी spins को सबै भन्दा राम्रो भाग हो, त्यहाँ पाँच रील र तीन पङ्क्ति प्रत्येक संग चार फरक स्लट छन्. स्तर सुरु रूपमा विशेष संगीत पृष्ठभूमिमा प्ले सुरु.
भाग्य Spins मा विजेता: यो मा spins बेलायत सर्वश्रेष्ठ मुक्त स्लट spins खेल स्तर आधार खेल भन्दा फरक काम गर्दछ. यहाँ बोनस खेल लोगो प्रतीक पहिलो स्लट मा स्पिन समयमा थपिएको छ. पहिलो स्लट देखा लोगो प्रतीक को संख्या बाँकी स्लट मा प्रतिकृति छ. प्रत्येक स्लट स्पिन को अन्त मा, बोनस प्रतीक रहस्य प्रतीक मा प्रकट र तपाईं तिनीहरूलाई संग ठूलो जित्न सक्छौं.
दुई फरक मोड र दुई-तरिका प्रतीक संयोजन संग, यो बेलायत सर्वश्रेष्ठ मुक्त स्लट spins एक लाभ बनाउन को लागि निश्चित सबै भन्दा राम्रो छ.